ဦးပိုင်ဘယ်လဲ? ဘာတွေလုပ်နေလဲ? ဘယ်သူတွေအတွက်လဲ? | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
ဦးပိုင်ဘယ်လဲ? ဘာတွေလုပ်နေလဲ? ဘယ်သူတွေအတွက်လဲ?
Leaveareply	စစ်တပ်ဆိုတာ နိုင်ငံရဲ့ Budget ( ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်း ) ကနေ
နိုင်ငံအတွက် ကာကွယ်ရေး အသုံးစားရိတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ
ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ သုံးစွဲရတဲ့ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ဖို့ သက်သက်ရှိရမယ့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်…
သူလဲ ကျန်တဲ့ Public Servant တွေလို ကျန်တဲ့ ဝန်ကြီးဌာန တွေလို ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း သက်သက်ပဲ… လက်နက်ကိုင် ပြီး ပြည်သူကို အနိုင်ကျင့်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာ ဝေလာဝေး စစ်တပ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ထူထောင်ပြီး ရသမျှ တင်ဒါ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ အကုန်သိမ်းကျုံးယူဖို့ဆိုတာ စဉ်းစားဥာဏ်ရှိတဲ့ သူတိုင်း လုပ်သင့် မလုပ်သင့် ဆိုတဲ့ သဘောကို နားလည်တယ်…
ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဦးပိုင်ရှိတယ်…
အရှည်ကောက်ပြောရရင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမိတက် ဆိုတဲ့ နာမည် နဲ့ မြန်မာ့ စီးပွားရေး က နေရာတော်တော်များများမှာ လက်ဝါးကြီးအုပ် အရင်းရှင် စနစ်နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် မှန်သမျှ ကို စစ်တပ်အာဏာ အလွဲသုံးစားပြုပြီး စိုးမိုးနေတာ ကြာလှပေါ့ ဟိုနေရာလဲ သူတို့ပါခဲ့တယ်… ဒီနေရာလဲ သူတို့ပါခဲ့တယ်…
သူတို့ဦးပိုင် စထောင်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ၄ ရပ်လဲရှိတယ်… အဲဒါတွေက
၁ ။ တပ်မတော်သားများနှင့် ယင်းတို့ ၏ မှီခိုသူ ဇနီး သားသမီးများ သက်သာချောင်ချိရေး
၂ ။ စစ်မှုထမ်းဟောင်းများနှင့် ယင်းတို့ ၏ မှီခိုသူ ဇနီး သားသမီးများ သက်သာချောင်ချိရေး
၃ ။ ပြည်သူလူထု သက်သာချောင်ချိရေးအား အထောက်အကူဖြစ်စေရေး
၄ ။ နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရေး.. ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ၄ ရပ်ပဲဖြစ်တယ်…
အဲဒီမှာ မေးစရာ မေးခွန်းတွေက တပ်မတော်သားများ စစ်မှုထမ်းဟောင်းများ နှင့် ယင်းတို့၏ မှီခိုသူ ဇနီး သားသမီးများ သက်သာချောင်ချိရေး ကို ရည်ရွယ်ချက် သီးသန့် အနေနဲ့ ထည့်ထားပြီး ဘယ်လောက်ထိ သူတို့ ရဲ့ စားဝတ်နေရေး ကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ တာဝန်ယူဖြည့်ဆည်း ပေးနေလဲ ဆိုတာပါ…
နောက် မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ အစိုးရ တာဝန် တစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူလူထု သက်သာချောင်ချိရေး မှာ တပ်မတော်သားများ စစ်မှုထမ်းဟောင်းများ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်က ပဂ္ဂိုလ်တွေကို ဘာ့ ကြောင့် ပြည်သူ စာရင်းထဲ မသွင်းပဲ သပ်သပ်ထားရတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်…
စေ့စေ့တွေးမှ ရေးရေးပေါ်တဲ့ ကိစ္စမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး…
ရှင်းရှင်းပြောရင် အပေါ်က မေးခွန်းတစ်ခုကို အဖြေ ပေးသွားတာကတော့ စစ်တပ် ယူနီဖောင်းအဟောင်းအနွမ်းလေးတွေနဲ့ လက်ထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း စာအုပ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စာအုပ်လေးတွေကိုင်ပြီး လမ်းထဲမှာ ဈေးထဲမှာ ကားမှတ်တိုင်မှာ နေရာစုံမှာ လိုက်ရောင်းနေကြရတဲ့ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကို အမြဲလိုလိုတွေ့နေရလို့ပါပဲ…
ဗိုလ်ကနေ ဗိုလ်ကြီး အဆင့်ရှိ In Service တော်တော်များများ နဲ့သူတို့ရဲ့ မှီခိုသူ မိသားစု တော်တော်များများမှာလဲ ဆိုင်ရာပိုင်ရာ အဆက်အသွယ် အတွယ်အကပ် နေရာကောင်း နောက်ခံ ဘက်ဂရောင်းသာ တောင့်တင်းခိုင်မာမှု မရှိရင် ဘယ်လို ရပ်တည်ကြရသလဲ ဆိုတာ အဲဒီအသိုင်းအဝိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ နီးစပ်သူ တော်တော်များများလဲ သတိထားမိကြမှာပါ…
ဒါဆို သူတို့ ရဲ့သက်သာချောင်ချိရေး အတွက် ဆိုပြီး စစ်တပ် တစ်ခုအနေနဲ့နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ စီးပွားရေး မလုပ်သင့်တဲ့ အနေအထားမှာ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း စီးပွားရေး လုပ်နေတဲ့ ဦးပိုင် အနေနဲ့ ဘာကြောင့်များ သူတို့ ကို လှည့်မကြည့်ပဲ ပစ်ထားတာလဲ…
ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုရပြီး ဘယ်လောက်ထောနေတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်အောက်က အဖွဲ့အစည်းတူ ညီအကိုတွေ ဘယ်လို အနေအထားမျိုးနဲ့ ရပ်တည် စားသောက်နေရသလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားပေးဖို့ ကောင်းတယ် လို့ မြင်မိတယ်…
ပြည်သူလူထု သက်သာချောင်ချိရေးအား အထောက်အကူဖြစ်စေရေး ဆိုတဲ့
ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကတော့ တော်တော် ရီဖို့ကောင်းမှာပါ….
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ တကယ် သက်သာချောင်ချိသွားတာက
အခွင့်အထူးခံ ရေပေါ်ဆီ Elite လူတန်းစား သပ်သပ်တစ်ရပ် ပဲ ဖြစ်ပြီး ထုံးစံအတိုင်း ကျောမွဲ နင်းပြား ပြည်သူလူတန်းစားကတော့ ပျောက်မသွားတဲ့ အပြင် ပိုပိုသာ ဆိုးလာခဲ့တာ အားလုံးမျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ဖြစ်နေလို့ပါပဲ…
သူတို့တကယ်ကြည့်ခဲ့တာက ပြည်သူလူထု အကျိုးသာ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် လက်ပံတောင်းကြေးနီစီမံကိန်း လိုမျိုး ကိုယ့်သဘောနဲကိုယ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိတဲ့ ဖက်စပ်စာချုပ်တွေ လုပ်ပိုင်ခွင့် တွေ ပေးခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်သယံဇာတတွေကိုသာ နှမြောတတ်ခဲ့ရင် ကမ္ဘာကို ကိုယ့်ပြည်တွင်းထွက် သယံဇာတ ပစ္စည်းတွေကို သူခိုးဈေးနဲ့ လက်သိပ်ထိုး ရောင်းခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး… အများကြီး အများကြီးပါ…
ဒါတွေပြောရင် တစ်ထောင့်တစ်ည ပုံပြင်စာအုပ် ကုန်သွားလိမ့်မယ်…
အဲဒီအကြောင်းတွေ ထိုင်ပြောလို့ ကုန်နိုင်ဖွယ် မမြင်ဘူး…
နောက်ဆုံး ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက် အကူဖြစ်စေရေး ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်တယ်
အဲဒီမှာ သူတို့စာမတတ် ပညာမတတ်မှန်း သေချာသွားတော့တာပဲ…
အပြည့်အဝဈေးကွက် ယှဉ်ပြိုင်မှု ( Perfect Competition ) မရှိတဲ့
တစ်ဦးတည်းချယ်လှယ်ချုပ်ကိုင်သော ဈေးကွက် ( Monopoly Market ) မှာ
ဘယ်လိုမျိုး သုံးစွဲသူ တွေရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုအပေါ် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်စွမ်းတွေ
အသစ်အသစ်သော နည်းပညာ တွေ သုံးစွဲပြီး သုံးစွဲသူတွေအပေါ် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းတွေ တစ်ဦးတည်း ဈေးကွက်ကို ချုပ်ကိုင်ချယ်လှယ်ပြီး မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ချွေးနှဲစာ ပိုက်ဆံတွေကို မတရား ဂုတ်သွေးစုတ် ယူတဲ့ နည်းလမ်းတွေဟာ Economics ကို စိတ်ဝင်စား တတ်ကျွမ်းလို့
နိုင်ငံအတွက် အလုပ်လုပ်တယ်လို့ ထင်ကိုမထင်ရပဲ ကိုယ့်ရဲ့ မိခင်နိုင်ငံတော်က ပေးထားတဲ့ စစ်တပ်အာဏာကို ကိုယ့်အကျိုးစီးပွား အတွက် လက်တစ်လုံးခြား အသုံးပြုရုံသက်သက်ဆိုတာ ထင်ရှားတဲ့အပြင်
ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်း ကိုယ့်မိသားစု ကိုယ့်ဆွေမျိုး ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်း ကောင်းစားရေး သက်သက်ကိုသာ ရှေးရှုတဲ့ Nepotism ဆန်ဆန် လှုပ်ရှားသွားတဲ့ အပြုအမူ စစ်စစ်တွေကိုသာ တွေ့မြင်ခဲ့ကြရတော့
ဒီရည်ရွယ်ချက်လဲ ကောင်းရဲ့ နဲ့မြောင်းထဲ ရောက်သွားခဲ့ရပြန်တယ်လို့ စိတ်နာနာ ရင်နာနာ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ ထပ်သတ်မှတ်ရတော့မှာ ပဲဖြစ်ပါတယ်…
ဒီလို ကိစ္စတွေ ဟာ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ့်နေရာ ကိုယ့်အရည်အချင်း ကိုယ်မသိလို့ ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာတွေလို့ပဲ သတ်မှတ်ရမှာပါ…. ရှင်းရှင်းပြောရရင် မြန်မာစကားပုံ ဒူးနေရာဒူး တော်နေရာတော် ဆိုတဲ့သဘောပါ…
လက်က လက်အလုပ်လုပ်…ခြေက ခြေအလုပ်လုပ်…ခေါင်းက ခေါင်းအလုပ်လုပ်ရင် ဒါမျိုး နိုင်ငံ ချွတ်ချုံမွဲကျသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး
LDC ( Least Develop Country ) စာရင်းထဲ ရောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး….
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ်ကြီးဆီကို တစ်လှမ်းပြီးတစ်လှမ်း
လျှောက်နေပါတယ်လို့ ပြောနေ ကြေငြာနေတဲ့ ဒီအချိန်မှာ ပြုပြင်သင့်တဲ့ ကိစ္စတွေကတော့ ဒုနဲ့ ဒေးပါပဲ…
အဲဒီပြုပြင်သင့်တဲ့ ကိစ္စတော်တော်များများရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာကြယ်ပွင့်ပြ အနေနဲ့ တည်ရှိနေတဲ့ Issue ကတော့ အနာဂတ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် နဲ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက် ရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်.. ဦးပိုင် ဘာလဲ ဘယ်လဲ ဆိုတာလဲ မေးခွန်း အထုတ်သင့်ဆုံးအချိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
နိုင်ငံအတွက် အကျိုးမပြုတော့တဲ့ ခေတ်စနစ် အဆိုး အဟောင်းတွေကို ပြုပြင်ပြီး အနာဂတ် နိင်ငံတော် သစ်တည်ဆောက်ရမယ့် အချိန်မှာ ဦးပိုင် သည် အုတ်လား သဲလား… ဒါမှမဟုတ် တုတ်လား ဂဲလား ဆိုတာ သေသေချာချာ ပြရတော့မယ့် အချိန်ရောက်ပြီလို့ သတိပေးတိုက်တွန်းရင်း….
This entry was posted in မြန်မာသတင်း, News and tagged ကိုရွှေထူး, ဗမာသတင်း, ဦးပိုင်, မြန်မာ, မြန်မာသတင်း, မြန်မာနောက်ဆုံးသတင်းများ, MEHL on November 23, 2013 by koshwehtoo.	Post navigation
← လေကြောင်းပို့ဆောင်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ချီးထုပ်ကျခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံမကြီးပွါး ရသည့်အကြောင်းများ →